မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်လှပစေတဲ့အရာ (၄) ခု | Duwun
မိတ်ကပ်တွေလိမ်းမှ လှတာမဟုတ်ဘူး။ မြင်တာနဲ့ သဘောကျသွားတာမျိုး
သင်္ကြန်နားနီးလို့ အလှအပနဲ့ ဖက်ရှင်ရေးရာတွေ ဖတ်နေကြချိန်မှာ မဒီလေးတို့ကို တကယ်လှသွားစေမယ့် အရာတွေကို မဒီက ပြောပြချင်လို့ပါ။ မိန်းကလေးတိုင်းတော့ လှချင်တာပဲဟုတ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ပင်ကိုယ်အလှစစ်သာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် မိတ်ကပ်မလိမ်းလည်း၊ တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားတွေမဝတ်လည်း လှနေမှာပါပဲ။ ဘယ်လိုအရာတွေက ကိုယ့်ရဲ့အလှစစ်ကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့ ...
လူတွေအပေါ် ဂရုဏာထားတတ်တယ်၊ ကြင်နာသနားတတ်တယ်ဆိုရင် တကယ့်ကို အေးချမ်းတဲ့ အလှစစ်ပါပဲ။ အမြဲတမ်း လောဘဒေါသတွေနဲ့ ပူလောင်နေတဲ့လူကို မြင်ရတာ ဘေးလူတွေပါ စိတ်ညစ်ရတယ်။ ကြင်နာစိတ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကို လူတိုင်းကချစ်ကြတယ်။ အေးချမ်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်နေမှာပါ။
အင်အားကြီးကြီးရွေ့လျားနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အဆင်ပြေအောင်နေဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းလွယ်ကူနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အခက်အခဲတွေကို တွန်းကန်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို ပုံမှန်အနေအထားတိုင်းရောက်အောင် ပြန်နေတတ်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ အဲ့လိုလူမျိုးတွေကို မြင်ရတဲ့သူအနေနဲ့ စိတ်ချလုံခြုံရတဲ့ ခံစားချက်မျိုး ရစေတယ်။
လူတွေ၊ တိရစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို ချစ်တတ်တဲ့ စိတ်လေးကလည်း မဒီလေးတို့ကို လှနေစေတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေကို မချစ်တတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုချစ်မလဲ? သူများတွေကရော ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ချစ်လာကြမှာလဲ?
ဉာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းက အမြဲတမ်း ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ လူတိုင်း အသက်ကြီးပြီး အိုမင်းလာမယ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွဲဆောင်မှုကျလာမယ်။ ဒါပေမဲ့ ပါးနပ်ထက်မြက်မှုက ဘယ်တော့မှ မအိုမင်းသွားဘူး။ အသိပညာဗဟုသုတဆိုတာ စွမ်းအားပဲ။